Ny ezaka fanarenana ny fizahantany dia mahazo tombony lehibe amin'ny fiverenan'ny sambo
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Ny ezaka fanarenana ny fizahantany dia mahazo tombony lehibe amin'ny fiverenan'ny sambo
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Karaiba • Cruising • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Minisitry ny Fizahantany Jamaika, Hon. Edmund Bartlett, dia nilaza fa ny fiverenan'ny sambo mandeha an-tongotra manerana ny seranan-tsambon'ny nosy, manomboka amin'ny tapaky ny volana novambra, dia vato matoky tanteraka avy amin'ireo mpandray anjara iraisam-pirenena lehibe amin'ny fiarovana sy ny fangatahana ny marika Jamaika. Izy io koa dia manondro ny fanokafana tanteraka ny indostria iray izay tena ilaina amin'ny ezaka fanarenana ny fizahantany ao Jamaika ary hanampy betsaka amin'ny famerenana asa tena ilaina.
Miakatra ny isan'ny fahatongavana, mijery tsara ny fiaramanidina amin'ny vanim-potoanan'ny ririnina, ary ho sahirana be ny fandaharam-potoanan'ny fitsangantsanganana amin'ny ririnina.
Novambra izay hahita sambo marobe midona ao Ocho Rios, Falmouth ary Port Antonio.
Jamaikana an'arivony no miankina amin'ny indostrian'ny fandefasana sambo ary mpamily manan-danja amin'ny fahatongavan'ny mpitsidika sy ny fandaniana.
“Miverina haingana ny indostrian'ny fizahantany eto amintsika noho ny fiantraikan'ny valan'aretina COVID-19. Miakatra ny isan'ny fahatongavana, mijery tsara ny fiaramanidina ho an'ny vanim-potoanan'ny ririnina, ary ho sahirana be ny fandaharam-potoan'ny fitsangantsanganana amin'ny ririnina, miaraka amin'ny fiakarana amin'ny volana Novambra izay hahita sambo marobe miondrika ao Ocho Rios, Falmouth, ary Port Antonio, "hoy i Bartlett.
Anisan'izany ny The World, toeram-pivarotan-tsambo ho an'ny Port Antonio; ny Carnival Sunrise, Norwegian Gem, MSC Meraviglia, AIDAdiva, ankoatry ny hafa, ho an'ny Ocho Rios; ary ny Princess Emerald ho an'ny seranan-tsambon'i Falmouth.
"Ny Cruise dia ampahany manan-danja amin'ny vokatra fizahan-tany ary mpamily manan-danja amin'ny fahatongavan'ny mpitsidika sy ny fandaniana. Jamaikana an'arivony no miankina amin'ny indostrian'ny fandefasana sambo, ”hoy izy.
Ny Carnival Corporation, ilay zotram-piaramanidina lehibe indrindra eran-tany, dia nanolo-tena handefa sambo 110 na mihoatra (mpitarika sambo 200,000), amin'ny marika isan-karazany, ho any amin'ny nosy eo anelanelan'ny Oktobra 2021 sy Aprily 2022.
Raha toa kosa ny Royal Caribbean International, laharana faharoa lehibe indrindra eran-tany, dia hanohy ny asa voafetra ho any Jamaika amin'ny volana Novambra amin'ity taona ity. Ary koa, nanamafy ny faniriana mafy hampiasa Jamaikana an'arivony amin'ny asa isan-karazany ny mpanatanteraka sambo ary miandry ny fanitsiana ny lalànan'ny governemanta mba hahatanteraka izany.
Miaraka amin'ny diarin'ny fiantsoana 16 an'ny Karnavaly mandritra ny telo volana ho avy, ny fiverenan'i MSC Meraviglia, ary ny Royal Caribbean, Disney, ary ireo zotram-piaramanidina hafa vonona hanomboka handeha any Karaiba, dia afaka nivezivezy tamin'ny volana Desambra i Jamaika, miaraka amin'ny saika ny sambo rehetra. Amin'ny faran'ny taona, Bartlett dia manantena mpandeha an-tongotra latsaky ny 300,000 mitsidika an'i Jamaika.
“Efa nivarotra an'i Port Royal tamin'ireo mpampiasa vola iraisam-pirenena izahay nandritra ny fifampiraharahana ara-barotra isan-karazany tany ampitan-dranomasina. Nandritra ny fihaonanay tamin'ny TUI dia nanambara fitsidihana sy antso maromaro nokasaina ho an'ny Port Royal Cruise Port izy ireo, nanomboka tamin'ny Janoary. Manantena izahay fa hisy antso dimy manomboka amin'ny Janoary ka hatramin'ny Aprily 2022 ao Port Royal. Efa nifampidinika tamin'ireo mpiara-miombon'antoka lehibe ao Dubai ihany koa izahay momba ny drafitra hampiasa vola amin'ny vokatra fizahan-tany ao Port Royal, "hoy i Bartlett.
Amin'ity vanim-potoana ity, ny Nieuw Statendam sy ny Nieuw Amsterdam an'ny Holland America Cruise Line, ny Crystal Cruises' Crystal Serenity and Crystal Symphony, ary ny Seabourn Ovation an'ny Seabourn Cruise Line, ny Royal Spirit of Adventure avy amin'ny Saga Cruises, dia voalahatra hiainga ao amin'ny Port Royal.
Hiverina any Montego Bay ny fandefasana sambo amin'ny Janoary 2022.